Falcelin ka dhalatay qodob wareed ay qortay Keydmedia | KEYDMEDIA ONLINE
Falcelin ka dhalatay qodob wareed ay qortay Keydmedia
Xog ku saabsan, aroos uu todobadkaan ku galay dalka Turkiga Fahad-ka loo heysto af-duubka iyo dilka Ikraan Tahliil, oo ay Keydmedia Online, baahisay, ayaa sababay fal-celin xooggan, waxaana muuqaal uu qoraalkaas uga jawaabayo soo duubay Sheekh Bashiir Axmed Salaad.
Sawirkaan ma matala arooska, waa farsamo ay sameysay Keydmedia Online.
MUQDISHO, Soomaaliya – 48-kii saac ee la soo dhaafay waxaa si weyn u xogeystay hadal heyn ka dhalatay, qodob wareed, ciwaaankiisu ahaa (Fahad-ka eedeysan oo ku aqal galay Turkiga), oo Keydmedia Online ay baahisay 5-tii September 2021, oo torraad ku beegneyd, kaas oo soo bandhigay xogo daaha gadaashiisa ah, oo ku saabsan in Fahad Yaasiin, uu tamashle iyo todobo-bax aroos u joogo xeebaha Turkiga.
Qodobkaas, si weyn ayaa loo qaadaa dhigay, waxaana si mug leh loo falanqeeyay qoraal ku jiray qodobka, kaas oo sheegayay in Agaasimihii hore ii NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, uu la xididay Guddoomiyaha Hay’adda Culimada Soomaaliyeed, Shiikh Bashiir Axmed Salaad.
KON oo xiganeysa ilo ku dhow hoggaanka NISA, ayaa warisay, in gabadha uu guursaday Fahad uu waalid u yahay Sheekh Bashiir, hayeeshee, Guddoomiyaha Majmaca Culimada Soomaaliyeed, ayaa iska fogeeyay inuu dhalay gabadha uu la aqal galay talihii NISA ee dhawaan xilka laga raacdeeyay.
KON, waxa ay aqristayasha u xaqiijineynaa in xogta ku saabsan arrinkaan aan ka soo xigannay ilo kala duwan oo aad ugu dhow hoggaanka hay’adda NISA, iyo shaqsiyaad madax-bannaan oo aan ku qabno kalsooni buuxda.
Ugu danbeyn, Warbaahinta Keydmedia Online waxa ay xushmad iyo qaddarin miisaan culus leh u heysaa, Culimada Soomaaliyeed, Culimada diintu waxa ay ka mid yihiin tiirarka bulshada.